Rete privata virtuale (VPN): Tari-dalana tena tsara ho an'ny mpanaradia
Questa è la Virtual Private Network (VPN) di questo genere di foto, ma anche di foto e immagini di Satria di Tsiambaratelo aterineto di Miditra e di altre informazioni su Lalana Maro. Ny orinasa dia miezaka manangona antontam-baovao maromaro kokoa amin’ny mpampiasa azy ireo raha toa ka manjary manjavozavo loatra izy (Tadiavo ohatra? Izany, izany, izany, ary izany) raha mizara ny nhahayana.
* Heatmap misy toerana izay anangonan’ny NSA ny angon-drakitra amin’ny Internet amin’ny fampiasana Informatique tsy matotra, fitaovana fandalinana goavana ampiasain’ny Agenzia nazionale di sicurezza nazionale (NSA). Fonte: The Guardian
Nandritra ny taona maro dia nampiasa fitaovana lehibe toy ny Facebook izahay, Google, ny rindrambaiko Microsoft ary ny fandrosoana haingana kokoa ny teknôlôjia dia nanosika ireo orinasa ireo hamaha ireo haira-kooaaaaaaaaair.
Ary raha toa ny governemanta dia mety miezaka ny hifehy ny toe-draharaha, amin’ny tranga sasany dia izy ireo ihany no meloka aminny fahotana mitovy amin’izay sahirana amin’ny orinasa – fampidirana ny tsiambaratelayyang angona tsy miankina.
Noho izany, inona no azontsika atao mba hiarovana ny fiainantsika manokana amin’ny aterineto? Questo è il modo più semplice per accedere a qualsiasi VPN comoda.
0.0.1 Suggerimenti degli esperti Ny mpamatsy sasany eny an-tsena dia mety tsy ho marina amin’ny fanolorana fanolorana azy. Mitaky izy ireo hanolotra servisy ara-pahasalamana amin’ny toerana samihafa, fa sasany amin’izy ireo dia tena virtoaly. Raha lazaina amin’ny teny hafa dia mety mifandray amin’ny mpizara iray any amin’ny firenena iray ianao, fa mahazo adiresy IP nomena any aminny firenena hafa. Ohatra, ny mpizara qualsiasi Sina dia mety ho avy qualsiasi Etazonia. Ratsy izany satria midika izany fa mandalo amin’ny tambajotra maromaro any amin’ny faritra samihafa manerana izao tontolo izao ny data mandra-pahatongan’ny farany. Tsy misy antoka fa ny mpikirakira cyber-criminals, maso-maso miafina miafina, na mpandika ny zon’ny mpamorona zon’ny mpamorona dia manana ny tanany amin’ny iray amin’ireo serivisy mpanelanelana ireo. Mba hialana amin’ity olana ity dia tokony hanao fizahana tsara ny mpampiasa mba hanamarinana ny tena toerana misy ny VPN. Ireto misy fitaovana efatra azonao ampiasaina amin’ny: Ping Test Tool in un monitor sintetico per app CA. Strumento Traceroute su un monitor sintetico per app CA. BGP Toolkit include tutti i servizi elettrici di Sampana Strumento Prompt dei comandi su CMD su Windows – Hamza Shahid, BestVPN.co Sicurezza
1.1 Protocolli VPN comuni
1.1.2 Protocolli Fampitoviana VPN –
1.3 2- Protocollo di protocollo di livello 2 (L2TP)
1.5 4 – Internet Key Exchange versione 2 (IKEv2)
2 Crittografia e forza dei metodi
3.3.3 3- Gioco
Ny mpamatsy sasany eny an-tsena dia mety tsy ho marina amin’ny fanolorana fanolorana azy. Mitaky izy ireo hanolotra servisy ara-pahasalamana amin’ny toerana samihafa, fa sasany amin’izy ireo dia tena virtoaly. Raha lazaina amin’ny teny hafa dia mety mifandray amin’ny mpizara iray any amin’ny firenena iray ianao, fa mahazo adiresy IP nomena any aminny firenena hafa. Ohatra, ny mpizara qualsiasi Sina dia mety ho avy qualsiasi Etazonia.
Ratsy izany satria midika izany fa mandalo amin’ny tambajotra maromaro any amin’ny faritra samihafa manerana izao tontolo izao ny data mandra-pahatongan’ny farany. Tsy misy antoka fa ny mpikirakira cyber-criminals, maso-maso miafina miafina, na mpandika ny zon’ny mpamorona zon’ny mpamorona dia manana ny tanany amin’ny iray amin’ireo serivisy mpanelanelana ireo.
Ping Test Tool in un monitor sintetico per app CA.
Strumento Traceroute su un monitor sintetico per app CA.
BGP Toolkit include tutti i servizi elettrici di Sampana
Strumento Prompt dei comandi su CMD su Windows
Sarotra kely ny mamaritra ny fomba fiasa VPN raha tsy misy ny antsipiriany ara-teknika. Na izany aza, ho un iroo izay maniry ny foto-kevitra fototra, VPN dia mamorona tonelina azo antoka avy amin’ny fitaovana ho anny mpizara VPN ary avy eo mankany aminny tranonkala manerantany.
Amin’ny antsipiriany bebe kokoa, ny VPN dia mametraka fanambarana fifandraisana amin’ny fitaovana. È adatto a tutti i tipi di persone che si trovano in un angolo di un server VPN. Misy vitsivitsy misy protocolli VPN vitsivitsy izay mahazatra, na dia samy manana ny tombony sy ny tsy fahampiana azy aza ny tsirairay.
Protocolli VPN comuni
In base ai protocolli forniti da Fifandraisana, dia misy ireo endriny mahazatra izay matetika no tohanan’ny tsy miankina amin’ny marika VPN. Ny sasany dia haingana kokoa, ny sasany dia maivana, ny sasany azo antoka, ny hafa tsy izany. Ny safidinao dia miankina amin’ny fepetra takinao, ka mety ho fizarana tsara ho anao ny mifantoka raha toa ka mampiasa VPN ianao.
IKEv2: Fifandraisana tena haingana ary indrindra indrindra ho un qualsiasi fitaovana find nefa manome fepetra fanamafisana kokoa.
Protocolli Fampitoviana VPN –
OpenVPN è un protocollo VPN open source. È così bello che non è così facile. Materiale open source azo atokisana amin’ny olona rehetra, izay midika fa tsy vitan’ny mpampiasa ara-dalàna ampiasaina sy hanatsara izany, fa ireo izay tsy manana fikasana lehibe dia afaka manara-maso izany amin’ny fahaanyotena manyanyara.
Na izany aza, Nanjary Nanjary Lehibe indrindra ny OpenVPN ary iray amin’ireo fiarovana azo antoka indrindra. Izy dia manohana di Ambaratonga Avoid Lenta Avoid Indrindra, anany’izany izay heverina ho ny ‘asam-panavotana’ 256-bit izay mitaky ny fanamafisana ny 2048-bit RSA, ary ny algoritmo XHUMX-bit SHA160 hash.
Noho ny loharanom-baovao misokatra dia nampifanaraka koa izy io aminny fampiasana amin’ny sehatra rehetra amin’izao fotoana izao, avy amin’ny Windows sy iOS aminny sehatra iraisam-pirenena hafa toy ny routers sy ny fyana Raspberry Pi.
Indrisy fa ny fiarovana avoid dia manana ny ratsan-drivotra ary ny OpenVPN dia matetika hita fa miadana be. Na izany aza dia betsaka kokoa ny fifanakalozam-barotra, satria ara-dalàna fa ny avo kokoa ny tahan’ny fampitomboana ampiasaina, ny fotoana bebe kokoa handraisana ny fizotran’ny data.
2- Protocollo di protocollo di livello 2 (L2TP)
Ny Protocol Tunnel 2 Layer (L2TP) no mpandimby azy Asio tadin-dokanga momba ny tondradrano (PPTP) ary Layer 2 Forwarding Protocol (L2F). Indrisy anefa, satria tsy nahafeno fepetra ny fameha ny fifandraisana dia matetika nozaraina miaraka amin’ny fiarovana IPsec. Hatramin’izao, io fitambaran-javatra io dia heverina ho toy ny fiarovana sy tsy manana vulnerabilità hatramin’izao.
Ny SICP (Secure Socket Tunneling Secure Socket) dia iray amin’ireo olona tsy dia fantatra loatra eo amin’ny olona tsy mahazatra, saingy tena ilaina izy io satria efa nosedraina tanteraka, nosedraina ary nifatotra tamin’ny fampidirana hah e rehetra ‘i Vista SP1.
Tena azo antoka koa izany, aminny fampiasana ny SSL / TLS 256-bit SSL / TLS ary ny 2048 bit bit. Fa indrisy fa tompon’ny Microsoft ihany koa, noho izany dia tsy misokatra ho anny fanadinam-panjakana izany – indray, tsara sy ratsy.
4 – Internet Key Exchange versione 2 (IKEv2)
Ny Internet Key Exchange versione 2 (IKEv2) per novolavolain’i Microsoft è Cisco Cisco come una vera e propria boalohany per il fatto che ho il giocattolo con la protocopia tonelina. Izy io koa dia mampiasa IPSec ho una crittografia. Ny fahaizany miverina amin’ny fampifandraisana ireo fifandraisana very dia nahatonga azy ho be mpitia eo amin’ny olona izay manararaotra azy noho ny fampielezana VPN amin’ny finday.
Protocollo di protocollo Ny Tunneling Point-to-Point (PPTP) dia iray amin’ireo dinôzôra eo amin’ireo protocolli VPN. ny protocolli taloha VPN. Na dia mbola misy aza ny fampiasana sasany, dia nidina an-dalambe io lalana io noho ny fiakarana midadasika be loatra amin’ny filaminana.
Manana izany vulnerabilità sono nalain’ireo olon-dratsy sy ratsy fanahy ela tany aloha, ka tsy mahafinaritra intsony. Raha ny marina, ny fahasoavana ihany no maharesy azy. Araka ny nolazaiko taloha, Ny fiarovana azo antoka kokoa dia ny fihenan-dàlana haingana kokoa dia ny mahita ny fihenanam-bahoaka.
Crittografia e forza dei metodi
Ny fomba tsotra indrindra hamaritana ny famaritana izay azoko eritreretina dia mety hanakorontana ny fampahalalam-baovao ka ny olona iray izay manana torolàlana amin’ny fomba nandraisanao azy dia afaka mandika izany aminany.
Makà ohatra iray tokana – Gatto.
Raha ampihariko amin’ny teny iray ny rakitra 256-bit, dia ho tototry ny lozam-pifamoivoizana tanteraka sy tsy hay sakanana izy io. Questo è un supercomputer, mahery indrindra e altri ancora a hitondra an-tapitrisany an-tapitrisany amin’ny fiezahana hamaha io teny tokana io miaraka amin’ny famenoana 256-bit izay nampiharina taminy.
Ireo fomba fitahirizana sy tanjaka ireo dia ampiharina matetika, arakaraka ny fampiharana ampiasaintsika, toy ny mailaka, ny navigateur, na no programa hafa. VPN amin’ny ankilany kosa dia mamela antsika hisafidy izay karazan-tsindrana tadiavintsika, satria ny karazan-tsika fidintsika dia hisy fiantraikany amin’ny fahombiazan’ny VPN.
Efa lasa aho izao fikarohana, si adatta a tutti i fanandramana in una VPN con una vasta gamma di tsara kokoa in una qualsiasi herintaona. Na dia mety tsy ho manam-pahaizana ara-teknika amin’ny VPN aza aho, dia azoko antoka fa efa fantatro mihoatra noho ny tena tadiaviko momba ireo tolotra ireo.
Questo è il nome di VPN di Fampiasana tra le VPN di Shathafa, tutte le app Android Mobile, tutte le funzionalità di navigazione sono miseramente modeste tra le altre. Ny sasany dia nahagaga ahy, fa ny sasany dia diso fanantenana.
Ho un po ‘di baldoria, non c’è niente di meglio di una volta che sei un fan di VPN iran na VPN iray napetraka e sono un milan di Windows iray. Tsara ny mahazatra, ary hitako fa matetika ny fitaovana ananantsika aty an-trano no mametra ny VPN mihoatra noho ny fanompoana.
Ny zavatra tena manan-danja nianarako momba ny fitaovana dia ny hoe raha mikasa ny hampiasa ny VPN mivantana eo amin’ny router ianao dia mila mahatsapa ny tena zava-dehibe iray – ny VPN anao dia tsy maintsy Manana processe kick-ass. Matetika izy ireo no voafetra amin’ny faran’ny ‘oh-my-God’ mpividy Wireless mpanjifa, ary na izany aza, dia voafetra ihany.
Ohatra, VPN Nanandrana vitsivitsy aho tamin’ny fanandevozana Asus RT-1300UHP izay raha mety ho anny ankamaroan’ny trano. Azo antoka fa afaka manatanteraka na dia ny haingam-pandeha manontolo aza (via LAN) è atramin’ny 400 + Mbps in tutto il WiFi. Kanefa dia nahomby di Famoahana di 10 Mbps raha vao natsangana di VPN. Tamin’izany toe-javatra izany, efa niasa hatrany ny processeur 100%.
Ny karazana router mila ilaintsika dia eo amin’ny andaniny ROG Rapture GT-AC5300 o Netgear Nighthawk X10 – Sarotra fa tsy ny fitsipika ankapobeny ho anny ankamaroan’ny tokantrano. Na dia haingana aza ny hafainganam-pandehan’ny aterineto on ny router no hijanona ho azy.
Le VPN VPN compatibili con Amin’ny tolotra 50 Mbps sono nanome ay akaiky ny hafainganam-pandehan’ny adiresy – matetika aho no manodidina ny 40-45 Mbps. Nifindra tany amin’ny andalana 500 Mbps aho tamin’ny farany, izay nahitako ny 80% amin’ny haingam-paneken’ny dokambarotra – amin’ny ankapobeny 400-410 Mbps.
Tamin’ny voalohany dia fisedrana haingana indrindra izy io, mba hitazonana rakitsoratry ny traikefa sy fanandramana ihany koa. Raha vao nametraka fitsipika iray aho, dia nanomboka nandinika ireo tranonkala hafa na horonantsary mivantana aho. Ho un po ‘di tempo, scommetti su VPN e ri-traduci afaka mamoaka horonam-peo 4k UHD.
Nesorina ihany koa ny fandalovana, ary hitako fa nisy nandiso fanantenana kely. Heveriko fa rehefa mandeha haingana ny Internet Internet su ho hitanao fa ny fampisehoana ny servisy VPN dia manjavona raha tsy mampiasa vola be amin’ny foto-drafitrasa tsara kokoa.
Tsy dia milalao be loatra aho (farafaharatsiny tsy ny lalao izay zava-dehibe ho an’ny fahombiazan’ny VPN) fa nanamarika ny fotoana ping. Raha mpilalao te hanandrana mampiasa VPN ianao mba hiditra amin’ny lalao iray tsy ao amin’ny firenenao, mety ho diso fanantenana ianao. Leggi tutte le notizie su Mitombo Bebe Kokoa Noho ianao avy amin’ny server VPN, questo è il motivo per cui haingana aza hafainganam-pandeha.
Toa ireo mpamatsy serivisy rehetra, ny orinasam-pifandraisan’ny VPN dia maniry anao hijanona miaraka aminy mandritra ny fotoana maharitra, satria io no fidiram-bolan’izy ireo. È inoltre possibile che il VPN sia collegato a Manolotra Fehezan-Dalàna Isan-Karazany Toy ny Isam-Bolana, Isam-Bolana sy ny Sisa. Matetika ny fotoana lava kokoa ny drafitra, ny mora kokoa ny isam-bolana isam-bolana, fa yy maintsy handoa mialoha ny fifanarahana rehetra ianao. Manantena handoa eo anelanelan’ny $ 9 ka hatramin’ny $ 12 isam-bolana amin’ny fifanarahana isam-bolana, miaraka amin’ny fihenam-bidy hatramin’ny 75% ho annyny fifanarahana maharitra.
Ireo VPN dia natoo voalohany sy lehibe indrindra hiarovana ny mombamomba anao ary hitazona hatrany ny angon-drakinao. Mampalahelo fa iray amin’ireo lafiny vokatry ny crittografia izay ampiasaina amin’ny fiarovana ny data dia ny mampihena ny fifandraisanao amin’ny Internet. Amin’ny maha-fitsipika ankiby, manantena fa hahatratra mihoatra ny 70% amin’ny hafainganao ny hafainganana rehefa mampiasa VPN. Ny antony hafa toy ny halaviran’ny mpizara VPN, ny vesatry ny mpizara sy ny sisa dia hisy fiantraikany amin’ny hafainganam-pandehananao amin’ny Internet mampiasa VPN.
È inoltre possibile utilizzare VPN VPN per hilaza aminao fa tsy hametra ny hafainganao izy. Na izany aza, misy toe-javatra hafa hodinihina ihany koa. Araka ny voalaza etsy ambony, manantena ny hahazo mihoatra noho ny ny hafainganam-pandehan’ny tsipika.
Amin’ny mety dia tokony ho tsotra tahaka ny fametrahana fampiharana iray ary miditra ny anaranao sy ny tenimiafinao. Avy eo ny zavatra tsy maintsy attaonao dia tsindrio bokotra iray ary hatambatra aminny mpizara VPN ianao. Mampalahelo fa tsy izany no vahaolana tsara indrindra ary ny fifandraisana sasany dia mety mila hatsaraina ho an fny fampisehoana tsara indrindra. Mpanome tolotra VPN maro an’isa toy NordVPN, Surfshark ary ExpressVPN dia hanana torolalana momba ny fomba fanaovana izany, tsy hahomby izay fotoana hifandraisana amin’ireo mpiasa amin’ny serivisin’ny mpanjifa.
Satria ny crittografia a 256 bit dia hampihenana ny fifandraisako betsaka, azo antoka ve amiko ny mampiasa crittografia a 128 bit?
Questo è il nome di Manandrana Manakana di VPN VPN ary manana fomba ahafantarana raha misy fifandraisana miditra avyinin mpizara VPN. Soa ihany, fantatr’ireo VPN ireo izany ary efa niatrika fanoherana izay manampy. Tadiavo ireo mpanome fanampim-panazavana izay manolotra fanavahana, na fanimbana ny serivisy.
Azoko è inoltre dotato di VPN fanitarana per browser?
Nanandrana ny fanitarana tranokala VPN vitsivitsy aho ary nahita fa ny ankamaroany dia latsaka ao anatin’ny sokajy roa lehibe. Misy ireo izay maneho ny proxy ary manaparitaka ny fifandraisanao amin’ny mpizara iray, ary ny sasany izay miasa toy ny fifehezana navigateur aminny fampiharana VPN feno. Ity farany dia midika fa mbola mila paikan’ny VPN napetraka ianao mba hampiasana ny fanitarana. Altri servizi VPN attivi per servizi VPN.
Eny ary tsia. Na dia tsy manana lalàna manohitra ny fampiasana VPN è ancora una volta firenena, ny sasany kosa dia mandrara izany. Amin’ny tranga henjana be, ny firenena sasany dia tsy mandrara ny fampiasana VPN è ora mety hampiditra am-ponja ireo mpampiasa VPN. Soa ihany fa misy firenena vitsy monja izay voararan’ny VPN hatramin’izao.
Miankina Betsaka aminny fomba azo antoka aminny fampiasanao ny fifandraisana VPN sy ny mpanome izay nofidinao. Nisy tranga maro izay nosamborina ireo mpampiasa ny VPN taorian’ny nametrahany ny finoany tamina mpanome tolotra iray izay namadika ny paompy mpampiasa tamin’ny farany.
Ny tsiambaratelo manokana ao anaty aterineto dia iharan’ny fahirano aminny teboka maro ary toa to nitranga tamin’ny alina izany. Voaroaka ireo andro izay tsy maintsy hiahiahy momba ireo mpanao heloka bevava aterineto, fa ankehitriny koa dia tokony hanahy amin’ny orinasa isika governemanta izay te hangalatra ny angon-drakitra noho izany antony ny manana.
Mazava ho azy fa tena mila VPN grazie a Miankina amin’ny firenena ao ianao, satria samy manana ambaratonga fandrahonana samihafa. Ny fanontaniana dia tsy zavatra azo valiana amin’ny eny tsotra na tsia.
Na izany aza, avy amin’ny tahan’ny fitomboan’ny ny hasarobidin’ny tsena manerantany VPN, Dia hilaza aho fa tena azo inoana fa mila iray na roa na impiry ianao. Fotoana izao no nanombohan’ny mpiserasera tsirairay nanokana ny fiainany manokana sy ny filaminana an-tserasera ho anny zom-pirenena ary hitady fomba ahazoana antoka ny fampahalalam-baovao.
Raha ny tena manokana dia tsapako fa ny fananganana ny serivisy VPN dia dingana manaraka ataon’ny mpampiasa aterineto tsirairay. Misy ny filana maika hanapotika ny saina fa tsy atahorana ny zavatra ataontsika ety anaty aterineto.
Raiso ohatra ohatra ny olona te-handeha an-tserasera sono hitady sary vitsivitsy amin’ny saka mahafatifaty. Eo am-panaovana izany dia misy ny fampahalalana toy ny toetrany fitadiavana azy, tiana / tsy tiany, toerana ary zavatra maro hafa nangonin’ny manam-pahefana na fikambanana. Tsy ampy ve izany fiheverana mampatahotra izany ve mba hanerena ireo fihetsika?